Landed house for sale in Yangon, Myanmar | ShweProperty.com
Landed Houses For Sale in Yangon
_ ပေ(25×50) ဂရံ BN-2 သိန်း(5000) ...
_ ပေ(25×50) ဂရံ BN-2 သိန်း(5000)
Property ID: S-1194564
_ ပေ(80×55) ဂရံ RC-3 သိန်း(4200)...
_ ပေ(80×55) ဂရံ RC-3 သိန်း(4200)
Property ID: S-1194563
Landed House For Sale in Thaketa
_ ပေ(80×80) ဂရံ(ပ) RC-2 သိန်း(12600) ...
_ ပေ(80×80) ဂရံ(ပ) RC-2 သိန်း(12600)
Property ID: S-1194559
Asking Price : 12,600 Lakhs
Two stories house for sale in Shwe Pinlon Housing in North Dagon Township. Land area - 4500 sqft, Grant land. House has Living-room, Two Master Bed-rooms, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Three air-conditioners and CCTV are already included. Sale Price - 5500 Lakhs (Nego) House…...
Two stories house for sale in Shwe Pinlon Housing in North Dagon Township. Land area - 4500 sqft, Grant land. House has Living-room, Two Master Bed-rooms, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Three air-conditioners and CCTV are already included. Sale Price - 5500 Lakhs (Nego) House…
Property ID: S-1194177
*** နှစ် ၆၀ ဂရန်...
*** နှစ် ၆၀ ဂရန်
Property ID: S-1193763
သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ Snow Garden Housing, 40’ x 60’ , 2.5RC ,6master bedrooms, အဲကွန်း ၁၀ လုံး၊ ရေပူ၊ရေအေး၊ Inverter, အသင့်နေအဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ၊ ဂရံမြေ၊…...
သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ Snow Garden Housing, 40’ x 60’ , 2.5RC ,6master bedrooms, အဲကွန်း ၁၀ လုံး၊ ရေပူ၊ရေအေး၊ Inverter, အသင့်နေအဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး ၊ ဂရံမြေ၊…
၊ Snow Garden Housing
Property ID: S-1193556
Asking Price : 5,900 Lakhs
နှစ်ထပ် RC Master Bed Room (5) ပေ (90x87) နှစ်(60)ဂရမ် အမည်ပေါက် ဘုရားခန်း(1)ခန်း ဧည့်ခန်း(2)ခန်း ထမင်းစားခန်း(1)ခန်း အခန်းအားလုံး ပါကေးခင်း…...
နှစ်ထပ် RC Master Bed Room (5) ပေ (90x87) နှစ်(60)ဂရမ် အမည်ပေါက် ဘုရားခန်း(1)ခန်း ဧည့်ခန်း(2)ခန်း ထမင်းစားခန်း(1)ခန်း အခန်းအားလုံး ပါကေးခင်း…
Advertiser : Ma Soe
Property ID: S-1190643
Asking Price : 28,500 Lakhs
Office no : 09420077142
ရန်ကင်း သစ္စာလမ်းမပေါ် (28*75)ပေ ပါဝါမီတာ ရိုးရိုးမီတာ ကျောင်းဈေးမှတ်တိုင်အနီး ဂရန်အမည်ပေါက် ...
ရန်ကင်း သစ္စာလမ်းမပေါ် (28*75)ပေ ပါဝါမီတာ ရိုးရိုးမီတာ ကျောင်းဈေးမှတ်တိုင်အနီး ဂရန်အမည်ပေါက်
Property ID: S-1192643
Landed House For Sale in Thanlyin
ခြံအကျယ် - 100 × 125 ( 12240.36 Sqft ) အိမ်အကျယ် - 20 × 42 ဈေးနှုန်း - 15000 ညှိနှိုင်း ...
ခြံအကျယ် - 100 × 125 ( 12240.36 Sqft ) အိမ်အကျယ် - 20 × 42 ဈေးနှုန်း - 15000 ညှိနှိုင်း
Advertiser : U Tun Win
Property ID: S-1191040
Office no : 0973207592,09789596920
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ပြည်သာယာလမ်းတွင် (40x50)အကျယ်ရှိ မြေပိုင်မြေ၊ 5RC, MBR, BR, A/C, ပါကေးခင်း ၊ ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…...
သင်္ဃန်းကျွန်း၊ ပြည်သာယာလမ်းတွင် (40x50)အကျယ်ရှိ မြေပိုင်မြေ၊ 5RC, MBR, BR, A/C, ပါကေးခင်း ၊ ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…
Property ID: S-1190264
Asking Price : 3,900 Lakhs
ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတောင်ကြားရပ်ကွက် ကုက္ကိုင်းရိပ်သာလမ်းရှိ အဆင့်မြင့် ပြင်ဆင်ပြီး လုံးချင်း ( 1 ) ထပ်တိုက် ရောင်းမည်။…...
ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေတောင်ကြားရပ်ကွက် ကုက္ကိုင်းရိပ်သာလမ်းရှိ အဆင့်မြင့် ပြင်ဆင်ပြီး လုံးချင်း ( 1 ) ထပ်တိုက် ရောင်းမည်။…
Listed9February 2019
Property ID: S-1186722
Asking Price : 13,000 Lakhs
ရန်ကင်း ၊ ပါရမီရိပ်သာ ၊ ၆၀x၄၀ ၊ ၂ထပ်ခွဲတိုက်သစ် ၊ မာစတာ၃ခန်း ၊ ရိုးရိုး၁ခန်း ၊ အဲကွန်း၆လုံး ၊ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး…...
ရန်ကင်း ၊ ပါရမီရိပ်သာ ၊ ၆၀x၄၀ ၊ ၂ထပ်ခွဲတိုက်သစ် ၊ မာစတာ၃ခန်း ၊ ရိုးရိုး၁ခန်း ၊ အဲကွန်း၆လုံး ၊ အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး…
Property ID: S-1189734
_ ပေ(40×60) ဂရံ RC-2 သိန်း(3600)...
_ ပေ(40×60) ဂရံ RC-2 သိန်း(3600)
View Phone 095148486
Property ID: S-1186770
_ ပေ(25×110) ဂရံ BN-2 သိန်း(6000) ...
Landed House For Sale in Dagon Myothit(East)
ဒီသုံးထပ်ခွဲလုးံချင်းအိမ်က မြေအကျယ်အ၀န်း 70’×90’ (6300 Sqft) ရှိပြီး ၊ ကုန်းဘောင်(VIP)မြေကွက်ဖြစ်ပြီး ၊အဆောက်အဦးအကျယ်…...
ဒီသုံးထပ်ခွဲလုးံချင်းအိမ်က မြေအကျယ်အ၀န်း 70’×90’ (6300 Sqft) ရှိပြီး ၊ ကုန်းဘောင်(VIP)မြေကွက်ဖြစ်ပြီး ၊အဆောက်အဦးအကျယ်…
Ma Thi Thi
Advertiser : Ma Thi Thi
Property ID: S-1181684
Office no : 09797788555
အသင့်နေ,Overhead Tank,Own Meter,Swimming Pool,Own motor,Power and lighting Line,ရေ+မီး,ဘိုထိုင်...
အသင့်နေ,Overhead Tank,Own Meter,Swimming Pool,Own motor,Power and lighting Line,ရေ+မီး,ဘိုထိုင်
Advertiser : Ma Nu
Property ID: S-1181565
Office no : 09973372066
ခြံအကျယ် - 60x83 Ground Tank + Overhead Tank Mate Room + Study Room Store Room ခြင်စကာ ကားဂိုဒေါင် (12x12) ဈေးနှုန်းအထူးညှိနှိုင်းပေးပါမည်။...
ခြံအကျယ် - 60x83 Ground Tank + Overhead Tank Mate Room + Study Room Store Room ခြင်စကာ ကားဂိုဒေါင် (12x12) ဈေးနှုန်းအထူးညှိနှိုင်းပေးပါမည်။
U Ye Myint Aung
Advertiser : U Ye Myint Aung
Property ID: S-1180834
Office no : 095079013, 09795889755
ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် (၄၁) ရပ်ကွက် အမှတ်(၅၀၆)/ရွှေယင်းမာလမ်း (ဦးဝိစာရလမ်းမကြီိးကျောကပ်)…...
ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ် (၄၁) ရပ်ကွက် အမှတ်(၅၀၆)/ရွှေယင်းမာလမ်း (ဦးဝိစာရလမ်းမကြီိးကျောကပ်)…
Property ID: S-1179181
Asking Price : 3,950 Lakhs
Office no : ‎095140630 (Hot Line ,24/7), 09785140630, 09965140
ဂရံအမည်ပေါက် မြေအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး (၂၀)ပေ (၆၀)ပေကျယ်ဝန်းကာ လမ်းကောင်းလမ်းသန့်မှာ တည်ရှိတဲ့ လုံးချင်းအိမ်တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။…...
ဂရံအမည်ပေါက် မြေအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး (၂၀)ပေ (၆၀)ပေကျယ်ဝန်းကာ လမ်းကောင်းလမ်းသန့်မှာ တည်ရှိတဲ့ လုံးချင်းအိမ်တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။…
Advertiser : Moe Moe Khaing
Property ID: S-1173742
Office no : 09254437471,09852713931
ဒီခြံနဲ့ လုံးချင်းအိမ်လေးကတော့ ပေ(၈၀)ပတ်လည်ကျယ်ဝန်းပြီး အိမ်ကိုတော့ ပေ(၃၅) ပေ(၄၀) တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အိပ်ခန်းစုစုပေါင်း…...
ဒီခြံနဲ့ လုံးချင်းအိမ်လေးကတော့ ပေ(၈၀)ပတ်လည်ကျယ်ဝန်းပြီး အိမ်ကိုတော့ ပေ(၃၅) ပေ(၄၀) တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အိပ်ခန်းစုစုပေါင်း…
Advertiser : Ko Thet Naing
Property ID: S-1171114
Office no : 095406864
Landed house for Sale in YangonLanded house for Sale in MyanmarProperties for Sale in Yangon
Landed house for Sale in AhlonLanded house for Sale in BahanLanded house for Sale in BotahtaungLanded house for Sale in CocokyunLanded house for Sale in DagonLanded house for Sale in Dagon Myothit(East)Landed house for Sale in Dagon Myothit(West)Landed house for Sale in Dagon Myothit(North)Landed house for Sale in Dagon Myothit(Seikkan)Landed house for Sale in Dagon Myothit(South)Landed house for Sale in DalaLanded house for Sale in Dawbon
Landed house for Sale in HlaingLanded house for Sale in HlaingtharyaLanded house for Sale in HleguLanded house for Sale in HmawbiLanded house for Sale in HtantabinLanded house for Sale in InseinLanded house for Sale in KamaryutLanded house for Sale in KawhmuLanded house for Sale in KayanLanded house for Sale in KungyangonLanded house for Sale in KyauktadaLanded house for Sale in Kyauktan
Landed house for Sale in KyeemyindaingLanded house for Sale in LanmadawLanded house for Sale in LathaLanded house for Sale in MayangoneLanded house for Sale in MingaladonLanded house for Sale in MingalartaungnyuntLanded house for Sale in North OkkalapaLanded house for Sale in PabedanLanded house for Sale in PazundaungLanded house for Sale in SanchaungLanded house for Sale in SeikgyikanaungtoLanded house for Sale in Seikkan
Landed house for Sale in ShwepyitharLanded house for Sale in South OkkalapaLanded house for Sale in TaikkyiLanded house for Sale in TamweLanded house for Sale in ThaketaLanded house for Sale in ThanlyinLanded house for Sale in ThingangkuunLanded house for Sale in ThongwaLanded house for Sale in TwantayLanded house for Sale in YankinLanded house for Sale in Shwe Pauk Kan